NIO $2824.2 အထိ နှောင့်နှေး အမိန့် များအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ကမ်းလှမ်း - Pandaily
Categories: Auto ကိုPandaily ဒီဇင်ဘာ 3, 2021 ဒီဇင်ဘာ 7, 2021 မှာ Posted
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူသုံးစွဲ သူများကို လျော်ကြေး ပေးမည်ဟု NIO ပြောသူဟာ မၾကာေသးခင္က စုစုေပါင္း ယြမ္ ၁ ၈၀၀၀ (ေဒၚလာ ၂၈ ၂၄. ၂၀) နဲ႔ ေအာ္ ဒါ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် မကြာသေးမီက ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း အဆင့်မြှင့်တင် မှုများနှင့် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် ထောက်ပံ့ငွေ များ ထပ်မံ ကျဆင်း ခြင်းတို့ကြောင့် အမှာစာ များ ပေးပို့ ခြင်း နှောင့်နှေး ခြင်းကြောင့် ဤ ကမ်းလှမ်း ချက်ကို ကမ်းလှမ်း ခဲ့သည်။
ယခင် အစီရင်ခံစာ များအရ Hefei JAC Automobile Manufacturing Base သည် မကြာသေးမီက လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုကို အဆင့်မြှင့် တင်ခဲ့သည်။ နှောင့်နှေး မှုသည် ဒီဇင်ဘာလတွင် အချို့သော ပိတ်သိမ်း မှု အမိန့် များ ပေးပို့ ရန် အချိန်ဇယား ကိုလည်း အကျိုးသက်ရောက် လိမ့်မည်ဟု ကုမ္ပဏီ ကပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များအတွက် ဘဏ္ subsid ာရေး ထောက်ပံ့ မှုသည် ၂၀၂၁ မှ ၃၀% အထိ ကျဆင်းသွားသည်။ ပြည်နယ် စည်းမျဉ်း များအရ ကား ဝယ်ယူ မှုအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ သည်ကား အသစ် လိုင်စင် ရ သည့်အချိန် ပေါ် မူတည်သည်။
ဤ အကြောင်း နှစ်ရပ် ကြောင့် ကုမ္ပဏီ သည်တစ် ဦး ချင်း ထောက်ပံ့ငွေ အစီအစဉ် ကိုအဆိုပြု နေသည်။ အထူးသဖြင့် သုံးစွဲ သူများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် ES8, ES6 သို့မဟုတ် EC6 ကို ၀ ယ်ယူ ရန် ငွေ သွင်း ပြီး ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် ကြိုတင် မှာယူ မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုင်ငံတော် ထောက်ပံ့ငွေ စံနှုန်း နှင့်အညီ ထောက်ပံ့ကြေး ကို ခံစား ရမည်။
၎င်းတို့အနက် စံ ဘက်ထရီ (75kWh) တပ်ဆင် ထားသော မော်တော်ယာဉ် များ သည်ယွမ် ၁၆, ၂၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ ၄၁. ၇၈) ထောက်ပံ့ကြေး နှင့် သက်တမ်း ပို ရှည် သော ဘက်ထရီ သက်တမ်း (၁၀၀ kWh) ရှိ မော်တော်ယာဉ် များ သည်ယွမ် ၁ ၈၀၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈ ၂၄. ၂) ထောက်ပံ့ကြေး ကို ခံစား နိုင်သည်။
အရနိုဝင်ဘာလ အတွက် ကုမ္ပဏီ ပေးပို့ ဒေတာကုမ္ပဏီ သည်ကား အသစ် ၁၀၈ ၇၈ စီးကို တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၀၅. ၆% တိုးခဲ့သည်။ အခြား ကုမ္ပဏီ သစ် နှစ်ခုဖြစ်သော Li Automobile နှင့် Xiaopeng Automobile တို့ သည်ထို လတွင် ကား အစီးရေ ၁၃, ၄ ၈၅ နှင့် ၁၅၆ ၁၃ အသီးသီး ရောင်းချခဲ့သည်။